Vaovao Mafana · Jona, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Jona, 2011
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Jona, 2011
Ejipta: Mipoaka Ny Hatezerana ao Tahrir
Nirefotra indray ny kidraka tao amin'ny kianja Tahrir, ivon'ny hetsi-panovàna Ejiptiana, ny alina teo (28 Jona) ary niitatra hatramin'ny anio (29 Jona). Kaonty maro samihafa no miely any anaty aterineto mikasika ny zavatra tena nitranga marina sy ny fomba nitsimbadihan'ny hetsika, ireny rehetra ireny izay nifanandrinan'ny fianakavian'ireo maritiora maty nandritra ny hetsi-panoherana - sy ny antson'izy ireo hisian'ny rariny, ny mpanao hetsi-panoherana, ny jiolahim-boto sy mpanakorontana niaraka tamin'ny polisy. Ny tatitra dia milaza fisianà baomba mandatsa-dranomaso nalefa tany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, ary ny mpanao fihetsiketsehana (na jiolahim-boto) namaly tamin'ny alalan'ny tora-bato sy cocktails Molotov - tsy dia voatery loatra ho toy izay ny fandehany.
India: Mpanao Fanadihadiana Momba ny Heloka Bevava, Manana ny Toerany Maty Voatifitra Tao Mumbai
Azia Atsimo 26 Jona 2011
Ny tolakandron'ny 11 Jona, Jyotirmoy Dey mpanao gazety voky traikefa dia maty notifirin' olon-tsy fantatra tena akaiky tokoa tao Powai, Mumbai. Maneho hevitra ireo Indiana mponin'i aterineto.
Myanmar: Baomba nipoaka tany amin'ny tanàna telo
Azia Atsinanana 24 Jona 2011
Baomba telo no nahazo ny tanàna telo lehibe tany Myanmar androany. Tsy nisy ny naratra araka ny tatitra. Nadikan'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices Tan ny tatitra vitsivitsy amin'ny teny Birmana izay manome ny vaovao voalohany momba ny fahapotehana naterany
Syria: Mitohy Ny Famoretana Na Eo Aza Ny Antso Iraisam-pirenena
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Jona 2011
Mitohy ny hetsi-panoherana manerana an'i Syria, ary tsy mampiseho fihetsika hilefitra ho fampiatoana ny herisetram-pamoretana ataony mihitsy ny fitondràna Siriana na eo aza ireo antso avy amin'izao tontolo izao.. Maneho hevitra ao amin'ny Twitter ireo mponin'i aterineto momba ireo fivoaran-draharaha faramparany.
Amerika Latina 14 Jona 2011
Espana: Mivoatra ny Hetsi-Panoherana, Saingy Mbola Mitohy Mafàna Ny Raharaha
Eoropa Andrefana 14 Jona 2011
Ireo fanentanana nanomboka tamin'ny 15 May tao Espana dia nivadika niandàlana ho famoriam-bahoaka tao an-toerana, fivorivoriana ary karazana fandraisan'andraikitra maro samihafa nanerana ny firenena. Saingy mbola avo dia avo ny maripàna eny an-dalambe eny. Tamin'ny 11 Jona, tao Madrid renivohitra, niafara tamin'ny firotsahana an-tsehatry ny polisy namely ireo mpanao hetsi-panoherana ny fitorevahana iray.
Ejipta: Fisokafan'ny vavahady ifandraisan'i Rafah sy Gaza
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Jona 2011
Nanokatra ny toerana fandalovana ao Rafah mankany amin'i faritr'i Gaza i Ejipta androany, mamela ny olona hivezivezy malalaka any Ejipta indray tato anatin'i efatra taona lasa. Ny sisintany, izay vavahady lehiben'i Gaza mankany amin'ny tontolo ivelany, dia nosokafana tsindraindray nandritra ny fitondran'ilay filoha Ejiptiana teo aloha Hosni Mubarak. Ity manaraka ity dia fihetseham-po vitsivitsy avy ao amin'ny Twitter momba ity fivoarana faramparany ity.
Koety: Mpampiasa Twitter Shiita Voasambotra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Jona 2011
Nasser Abul , tovolahy Shiita, avy ao Koety, nosamborina, araka ny fantatra, noho ny nandefany Tweet tao amin'ny vohikala fitorahana bilaogy kiritika, Twitter. Ity no fihazonana mpampiasa Twitter voalohany noho ny tweet nalefany teto amin'ny firenena. Nahatonga fisavorovorona tao amin'ny Twitter izany fisamborana izany, ka betsaka ireo nitaky ny famotsorana Azy.